Kooxda Manchester United oo go’aan ka gaartay mustaqbalka Alexis Sanchez – Gool FM
Kooxda Manchester United oo go’aan ka gaartay mustaqbalka Alexis Sanchez
(Manchester) 14 Juun 2020. Sida laga helayo wararka Ingiriiska ka imaanaya, weeraryahanka Inter Milan ee Alexis Sanchez ayaa dib ugu soo laaban doono kooxda milkiyaddiisa iska leh ee Manchester United marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan, iyadoo dib loogu soo dhoweyn doono Old Trafford.
Xiddiga reer Chile ayaa waqti ciyaareed amaah ah ku qaadanaya Nerazzuri, balse wali waxa uun ku jiraa maalmihii mugdiga ee soo billawday markii uu ku soo biiray Red Devils horraantii sanadkii 2018.
31-sano jirkaan ayaa Manchester United kula jira heshiis ay ka harsan tahay labo sano, waxaana toddobaadkii ka qaataa mushahar dhan 500,000 oo gini.
Majaladda Ingiriiska ka soo baxda ee Mirror ayaa warineysa in macallinka Man United ee Ole Gunnar Solksjaer uu la kulmay guddoomiye ku xigeenka kooxdaas ee Ed Woodward, waxaana ay isla go’aansadeen inay sii heystaan Alexis halkii ay heshiiskiisa burburin lahaayeen.
Kaddib aafadii soo gaartay dhaqaalaha kooxaha kubadda cagta, waxaa kooxda Ingiriiska ah garatay inaysan heli karin dalab ku haboon oo ay ku fasaxaan, waxaana la fahansan yahay inay sidaas tahay sababta ay u sii heysan doonaan, walow la sii saadaalinayo inuu Sanchez noqon doono dooqa labaad.
Inkastoo Macallin Solksjaer uu ku faraxsan yahay inuu laacibkii hore ee Udinese ku daro qorsho ciyaareedkiisa 2020-21, misena waxa uu walaac ka muujinayaa fursadda weerarayahannada da’da yar ee Daniel James iyo Mason Greenwood.
Alexis Sanchez ayaa Manchester United ugu soo biiray heshiis isdhaafsi ah oo Arsenal ay ku qaadatay Henrikh Mhkitaryan bishii Jannaayo ee 2018, balse waayihiisii quruxda badnaa ayaa isu baddelay qarow aanan natiijo lahayn, isagoo ku guuldarreystay inuu ka soo dhalaalo xukunnadii Jose Mourinho iyo Ole, taasoo ugu dambeyn sababtay in Inter Milan uu amaah ugu biiro xagaagii hore, sidaas oo ay tahayna dhaawacyo iyo bandhig liita awgii wali waxa uu dhex dabaallanayaa maalmihii qaab ciyaareed xumada.
Manchester United oo diyaar u ah inay iibiso mid ka mid ah xiddigaheeda khadka dhexe si ay Real Madrid ugu garaacdo saxiixa Van de Beek